Shinoa vavy - ny fiarahana amin'ny Aterineto ny vohikala - Hahita ny tena fitiavana
Shinoa vavy — ny fiarahana amin’ny Aterineto ny vohikala — Hahita ny tena fitiavana
Inona no azo lazaina momba ny tovovavy Shinoa.
Misy Shinoa kokoa ny tovovavy mihoatra noho ny fiaviana na kolontsaina any amin’izao tontolo izao. Shina dia isan’ny mponina matory goavana. Indray mandeha Shinoa monina ny any ivelany, na toy ny fitsipika liberalized get lasa ny ankizy iray isaky ny fianakaviana politika, ny isan’ny vahoaka Shinoa eto amin’izao tontolo izao dia hanitatra hatrany. Isika sisa no ho tavela amin’ny iray milay ny fitomboan’ny tokana Sinoa vavy. Fa bebe kokoa ny taranaka manaraka sy araka ny fotoana. Amin’izao fotoana izao, dia efa mba hanorim-ponenana ho an’ny an-tapitrisa tokana Sinoa vavy ny vonona ny daty. Rehefa manoratra Sinoa vavy ho vady, dia midika hoe ny olon-dehibe ara-dalàna -taona Sinoa vavy vady. Ny ankizivavy dia tahaka ny teny hoe ‘lehilahy’, na hoe ‘olon-tiany’ na ‘olon-tiany’. Izany fotsiny ny teny hamaritana ny vehivavy. Tovovavy shinoa ho amin’ny hevitry ny tena tsara ianao. Izaho Amerikana iray mipetraka any Eoropa, ary afa-tsy voafetra ny traikefa amin’ny Sinoa ny zazavavy ho namana, nefa ny zavatra nataon’izy ireo efa nampita ahy dia izy ireo nentim-paharazana sy te-fianakaviana sy te hikarakara ny fianakaviana. Izy ireo dia tsy ho tia ady, na mangataka, amin’ny ankapobeny mazava ho azy, fa tsy ny kolontsaina. Noho izany, ny lehilahy izay te ho tia ny fianakaviany sy am-pilaminana an-trano ny Shinoa zazavavy dia tsara vady. Ny lafy ratsiny dia Shinoa ireo ankizivavy tsy ara-pivavahana. Raha toa ianao ka katôlika, dia mety hiova ho ny ampakarina fa, ao am-po, dia tsy ara-pivavahana.
Izany dia noho ny kaominisma
Noho izany, raha toa izany raharaha izany mihitsy ianao, aza mihevitra ny ankizivavy Shinoa ho ampakarina rehefa mety manana olana amin’ny ho avy. Gandhi hoe:»Ianao dia ny fivavahana.»Marina izany. Anontanio ny tenanao hoe inona izany fanambarana izany dia midika hoe ianao. Manao vehivavy Shinoa scam anao eo amin’ny fiarahana? Toy ny vehivavy Amerikana, na ny olona hafa ao amin’ny tontolo misy ny tsara sy ny ratsy fa mieritreritra ny Fisavoritahana sy ny Taoist fiantraikany eo amin’ny kolontsaina Sinoa te hiteny aho fa ny ankamaroan’ny olona tsara tarehy ara-pitondrantena. Vitsy ny teny Sinoa andian-teny izay mety ho ilaina dia ampiasaina ao amin’ny chat, na dia vitsy dia hahatonga azy ireo: Ireo no malaza indrindra amin’ny teny Sinoa (notsorina amin’ny teny Sinoa) ny vavahadin-tserasera. Izy ireo dia tsy Sinoa mampiaraka toerana. Mila mampiasa mandika ny fitaovana sy fantaro ny fomba sonia ho an’ny ny karajia sy ny fiarahana amin’ny ampahany. Fa raha ianao no tsy misy s ny an-tapitrisany ara-dalàna Tovovavy shinoa fa dia hiresaka aminao.
Noho izany, mendrika ny ezaka
Afaka hiresaka amin’ny Sinoa vavy ho maimaim-poana. Tsy hahatakatra ny kolontsaina Sinoa, fa efa nijery ny Shinoa lahatsary mba hianatra kely Sinoa sy hahatakarana azy kokoa. Izaho tsy mitady ny Shinoa ampakarina satria izaho manambady. Raha ny tena izy, tsy dia mijery tovovavy Shinoa aho rehefa mijery ny lahatsary, aho te-hianatra teny Sinoa. Fa raha te-hijery tovovavy Shinoa’ ny lahatsary ho an’ny fianarana momba azy, manoro hevitra aho ny zavatra vitsivitsy. Azonao atao ny mampiasa Youku Raha ianao no mahazo manambady, na dia miaina ao Shina ny kely indrindra faneriterena tanàna dia mazava ho azy Hong Kong. Izany no tena toerana mpila ravinahitra afaka miaina sy miasa ary hiteny malagasy tsy misy olana loatra. Fantatro mihoatra ny iray Amerikana-Sinoa mpivady izay monina na diniho ny Hong-Kong safidy. Hahazo ny tena, raha tsy afaka mahita ny ankizivavy iray any Shina ianao, izaho dia tsy afaka hanampy anao. Jereo ny manta mponina tarehimarika ao ny lehibe indrindra Shinoa tanàna, tsy manana ny ho mety amin’ny mpiara-miasa eo anivon ity vahoaka ity. Isa midika zavatra ao mampiaraka. Taorian’ny anao hamantatra ny mponina foibe noho ianao mila mitady ny fidirana amin’ny ireo tokan-tena. Aho te hihaona sipa avy any Shina raha toa ka fantatrao izay mety hahazo teny Sinoa zazavavy ny finday isa ampahafantaro ahy, dia jereo ao amin’ny ny toerana azonao fahazoan-dalana mankany ambony
← Izay Mihaona Tokana Vehivavy Shinoa ny vaovao Shinoa vadiny tany am-Boalohany sy ny namany sary momba ny Vehivavy Shinoa ary ny Tovovavy Shinoa
Maimaim-Poana Daty Maimaim-Poana Tanteraka Shina Mampiaraka An-Tserasera →